DHACDO CAJIIB AH: ‘’Si Fiican Ii Fiiri , Hooyo Ma I Xasuusataa?? Waa Su’aalaha Uu Weydiiyey Noppajit Monlin Hooyadiisa ….
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Wednesday, 22 Nov 2017 17:32 PM / No Comments
Haweeney u dhalatay wadanka Thailand ayaa awoodi weysey inay aqoonsato wiilkeeda oo 22 sano jir kadib markii uu iskusoo sameeyey qaliin wajiga qurxinaya isagoo kasoo muuqday kadib Tv-yada South Korea.
Noppajit Monlin oo 22 sano jir ah ayaa ku qanci waayey qaabka uu marka hore u sameeysanaa wajigiisa, waxaana uu go’aansaday inuu qaliin wajiga ah maro maadaama uu marka hore wajiga kaga buuxeen finan.
Noppajit Monlin ayaa markii hore dareemay inuu faquuq kala kulmayo bulshada ama saaxibadiisa , xilliga uu shaqada soo aado goobta shaqada keligiisa ayuu dareemi jiraa si lamid ah xilliga raashiinka keligiisa ayuu cunteyn jiray.
Balse Noppajit Monlin ayaa go’aansaday inuu si deg deg ah ku aado South Korea isagoo maray qaliin deg deg ah ,waxaana dhacday inuu kasoo muuqdo Tv-yada Thailand gaar ahaan ‘’Let Me In ‘’ waa mid kamid ah barnaamujada ka baxa Tv ku yaala Thailand.
Moalin ayaa wax badan ku qaatay South Korea sababtoo ah waxaa u socday nidaaminta qaliinka ,, sidaas darteeda waxaa uu mararka qaar lasoo xiriiri jiray saaxibadiisa iyo qoyskiisa isagoon sheegin u jeedada uu u aaday halkaas.
Qeybta 3aad ee Barnaamujka ‘’Let Me In’’ waxaa lagu arkau Noppajit Monlin oo muuqaal gaar ah ximbarsan laguma mashquulin sababtoo ah waxaa loo arkay qof kale balse sharaxaaad dheer kadib waa la amini waayey.
‘’Xaqiiqdii waan idin xiisay , mana ahan ciyaar,’’ ayuu Moalin ku sheegay TV-ga.
‘’Hooyo ma I xasuusataa? Si fiican ii fiiri, ‘’ Noppajit Monlin ayaa sidaa weydiiyey hooyadiisa, waxayse ku jawaabtay ‘’ ma adigaa ? run ii sheeg ma adigaa? Ayey ku cel celisay.
‘’Dadka waxay I dhahaan waxaa tahay ruux kale , waxaan dareemaa qanacsanaan , ka hor dadka aan arkin wajigeyga hore , balse kama aqbalidoono, hada waxaan helay saaxiibo badan’’ ayuu yiri Moalin.
Dhacdadaan ayaa noqotay mid layaab ku noqotay saaxibada iyo hooyada dhashay Noppajit Monlin sababtoo ah waxaan oo dhan waxay dhaceen isagoon qof la wadaagin.